O doro anya.
Anyị na-akpọ anyi DashSquad Naijiria. DashSquad banyere otu ise sitere na ebe dị iche iche na akuku Nigeria maka nnabata Dash na ala anyị bụ Naijiria.
Kedu ihe bụ Dash?
Dash bụ ego dijitalụ ị nwere ike iji zụta ihe n'ebe ọ bụla. Di ka Na olu wikipidia.org ọ bụ ego cryptocurrency chọrọ i bu ego kachasị di mfe na ụwa. ọ bu gini ka m na akowa? Dash bụ ego di na ụdi digitalu. Otu isi nwere ike iji naira kwụọ ụgwọ maka ọrụ, ka i nwekwara ike iji ego digitalu(DASH).
kedu ihe m na ede banyere ha? DashSquad
Anyi bụ ndị mbụ na Naijiria maka cryptocurrency, bia nwe nnukwu aguu maka Dash. Anyi nile a hapuola naira maka Dash na eleghi anya na azu, cryptocurrency dị ka Dash bụ ihe kwesịrị mmadụ nile na Naijiria ugbu a. Dashsquad ebumnobi bụ ịkwado Dash na Naijiria. Ebumnuche anyị bụ ka anyị gba mbo hu na mmadụ ise ọ bụla ahuru n' ụzọ abụọ n'ime ha maara banyere Dash. Anyi abiaghi ikwụpụta okwu banyere krptocurrenci ozo, ọ bụ naanị Dash. Dashsquad choro igbanwe etu Naijiria …
Ọtụtụ n'ime anyị kwesịrị ịmara na ego dị na ụlọ akụ anyị agaghị eme ka ị nwe ego n'efu. ọ bụ ike agbụ. I debe ego na ụlọ aku agahi amutara gi mmagi obula ka ma ha ewere ego i tara ahụhụ kpata binye mmadu ma nwere ụrụ di n' ime ya. Enweela ọtụtụ ndị na-eche na ị kpakoba NAIRA ga-eme ka ha bụrụ “Robert” ma ọ bụ “Donald Trump” nke oge anyị. Ha na-ekwu ihe dị ka; ọ bụghị ego ole ị nwere kama ole ị na akpakoba! ana m aza ọtụtụ oge, ma ọ bụrụ na ịchekwaa “FIAT” ị n…